दिनमा एउटा स्याउ खाँदा हुन्छ लाभै-लाभ - dsnews
तर, स्याउको महत्व यतिमा मात्र सीमित छैन । स्वास्थ्यका लागि यो बहुउपयोगी छ । मोटा व्यक्तिहरुलाई मुुटुरोग, डाइबिटिज, ब्लड प्रेसर आदि समस्याहरुले दुख दिन्छन् । स्याउमा पाइने फाइबर मोटोपना कम गर्न सहायक हुन्छ । मोटोपना कम भएपछि मानिसहरु विभिन्न खतरनाक रोगहरुको चपेटामा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ । साथै, यसमा पाइने पौष्टिक तत्वले शरीरलाई बलियोर र निरोगी पनि बनाउँछ ।
Previous के हो पिनास ? कसरी बच्ने यसबाट ?
Next टाइफाइड भएमा के गर्ने ?